ULeleti Khumalo umemezele ukuthi uyashiya kuZalo | News24
ULeleti Khumalo umemezele ukuthi uyashiya kuZalo
Cape Town – ULeleti Khumalo noSihle Ndaba bobabili bayashiya emdlalweni ongaconsi phansi kwabaningi eNingizimu Afrika, uZalo, uma sekuqala isizini yesine yalo mdlalo ngoFebhuwari.
Lo mlingisi osemnkantshubomvu, odlala indawo kaZandile MaNzuza Mdletshe ongunkosikazi kamfundisi kulo mdlalo, uthe lesi yisikhathi sokuthi athole uguquko empilweni, kepha uNdaba odlala indawo kaSimangele, akazange atholakale ukuba aphawule.
Bobabili la balingisi bazovela eziqeshini eziyisithupha zesizini ezoqala, kanti bazogcina ukuqopha ngomhlaka-15 Disemba nonyaka.
Lo mdlalo othandwa kakhulu okhonjiswa ku-SABC 1 phakathi nezinsuku ngo-20:30 uhamba phambili ngababukeli eNingizimu Afrika, njengoba ubukelwe ngabantu abangu-9.23 million ngoSepthemba.
Lokhu kusho ukuthi nezingxoxo zezinkontileka phakathi kwabaphathi nabalingisi ziba lukhuni, njengoba abalingisi benenkolelo yokuthi kumele bakhokhelwe ngendlela efanayo naleyo abangenisa ngayo imali.
OLUNYE UDABA: Ujoyina uZalo umlingisi wodumo
Akucaci ukuthi yini eholele ekushiyeni kwala balingisi njengoba kuke kwaba namahlebezi okuthi izingxoxo ngezinkontileka zifinyelele kwangqingetshe.
"Ngibonga ngiyanconcoza ngethuba engilitholile futhi uZalo lunginikeze ithuba lokwakha ubudlelwano nababukeli kanye nabalandeli bami abebelokhu bengeseka kusukela ngaqala ukungena kwezikaqedisizungu," kusho uKhumalo esitatimendeni.
"Yize lesi kungabanga yisinqumo esilula, sekuyisikhathi sokuthi ngiqhubekele phambili nempilo ngibone ukuthi ikusasa lingiphatheleni ngiphinde ngizikhulise nami ngokomsebenzi."
IStained Glass TV, okuyiyo ephrojusa lo mdlalo, ithe izoqhubeka nokuphakela ababukeli iziqephu zomdlalo ezihlabahlosile kanti futhi kunabalingisi abasha abazofika.
"ULeleti noSihle badlale indima enkulu kuZalo; bayohlale beyingxenye yalo mndeni," kusho uPepsi Pokane ongomunye wabanikazi bale nkampani.
"Bekumnandi ukusebenzisana nabo kanye ne-SABC bathola nethuba lokubonakalisa ithalente labo."